समय सन्दर्भ : नेहालाई न्याय :: Press Chautari ::
योरुना उर्फ नेहा पुन ।
अर्थात पोखरामा हालसालै मारिएर र्निवष्त्र वेबारिसे अवस्थामा फ्याँकिएकी एउटी चेली ।
यत्तिबेला नेहाको बलत्कार र त्यसपछिको हत्या प्रकरणले पूरै पोखरा आन्दोलित छ । पोखरामात्रै होइन अहिले नेहाको न्यायको पक्षमा बिभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्का बिरोध र अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रशासन र राज्यलाई कडा दबावका आवाजहरु छ्वातछुल्ल पोखिएकाछन् । र पोखिएकाछन् एउटी चेलीको असामयीयक निधनमा लाखौं न्यायप्रेमीहरुको अश्रुधाराहरु ।
हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं नेहाको परिवारले खप्नु परेको यो बज्रपातलाई । यो पल हामी सबैले शोक सन्तप्त परिवारमा धैर्यधारण गर्ने क्षमता मिलोस र मृतक चेली नेहाप्रति हृदयको अन्तरकुनाबाट समवेदना व्यक्त गरौं ।
नेहा पुन जो जीवनलाई जित्नको खातिर कलिलै उमेरमा संघर्षको गहु्रङगो भारी उचालिन । र उचालिन परिवारको निम्ति जिम्मेवारीको आधा आकास । जसले उनको परिवारको आर्थिक बोझ केहि हलुङगो भएथ्यो । यसैको खातिर सखारै जागीरको लागि निस्कने नेहा राती अबेर घर फिर्ने गर्थिन् । फुर्सदिला दिनहरुमा उनी आफुभित्रको कला पस्कन्थिन गीतका दृश्यहरुमा त कतै चलचित्रका पर्दाहरुमा ।
चलचित्रका कथा र पटकथाहरुमा निडर र न्यायको पक्षपाती नेहा आफै चाँहि गत मंगलबार असामयिक ढङ्गले अस्ताईन् । कहिल्यै नउदाउने गरी । सायद बलत्कारीहरुसँग जीवनरक्षाको लागि चलचित्रमा झैँ उनी पनि खुब लडिन होली । तर जित्न सकिनन् मृत्य र हारिन नरभक्षी राक्षसहरुसँग ।
उता नेहाको असामयिक निधनमा न्यायका पक्षपातीहरु सडक, पार्क र गल्लीहरुमा आन्दोलित छन् । तर राज्य मौन जस्तै छ । महिला अधिकार र मानव अधिकारका नाममा करोडौं रुपैयाको लाभ लिने संघसंस्थाहरु किन चुप छन् यत्तिबेला ? न्यालयको भित्ता र टेबलमाथि पट्टि बाँधेर समानान्तर वजनको तराजु उचालेकी महिला जस्तै किन पट्टि बाँधेर बसेको छ न्यायलय ? महिला अधिकारकै नारा मुखमा च्याँपेर बिदेशी डलर ओढ्ने/ओछ्याउँने एनजिओ र आईएनजियोहरु किन ढोकै बाहिर एउटी चेलीले मृत्यवरण गर्नु पर्दा किन केहि बोल्दैनन् ? कहाँ छन् देशबिदेशमा न्याय, समानता र अधिकार प्राप्तिको निहुँमा खोलिएका सामाजिक संघसंस्था र उसभित्रको महिला बिभाग ? के नेहाको न्यायमा अलिकति पनि छट्पटी हुन्न तिनलाई ? के अब पनि सरम लाग्दैन यिनलाई यस्ता खोक्रो आडम्बर ओकल्नलाई ?
जनजनले सोध्ने प्रतिनिधी प्रश्न यहि हो यो ।
यत्तिबेला देशको बिभिन्न सर्बोच्च निकायमा महिलाहरुको उल्लेख्य उपस्थिती छ । हामीले यसैमा गर्व गरेर भंगेरे छाती मात्रै पिटेर हुँदैन । इतिहास निमार्णसँगै ठोस र उपलब्धीमूलक कर्म गरिएन भने अबको युगमा इतिहास स्वयम्ले धिक्कार्ने छ । यसर्थ केहि बोल्नुस् सभामुख ओनसरी घर्तीमगर ज्यु, तपाईको घुरेन, कान्ला र बारीका डिलमा नेहा पुनहरु दिनदहाडै मरीरहेछन् । तपाई त जनताले जिताएर ठालु बनाएका नेताहरुको गोठालो जस्तै हुनुहुन्छ । बोली दिनुहोस न केहि यी चेलीको पक्षमा । तपाई त संसदको सबैभन्दा अग्लो कुर्सीमा बस्नु भएको हाम्रो मान्छे...।
यहि समय उता हाम्रो गणतान्त्रिक मुलुकमा पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विराजमान हुनुहुन्छ । तपाई पनि नेहाको पक्षपाती भएर उँभीदिनुहोस्न राष्ट्रपति ज्यू । यसो गर्नु भयो भने अन्यायमा परेका तपाईको देशका जनताले हर्षले पहाड जत्रो छाती हर्षले पिट्नेछन् । दण्डहिनताको अन्त्य भयो भने मात्रै अपराधीको शीर माथि उठ्ने छैन, अन्यथा हिजो निहत्था नेहा पुन मरिन भोली अर्की नेहा भण्डारी मर्लिन...पर्सी नेहा राई पर्लिन...।
एउटा संयोग यहि समय मेरो क्याम्पसे साथी कृष्ण बहादुर राउत कास्की जिल्लाको प्रमुख छन् । जोसँग नेपाल कमर्स क्याम्पस (मीनभवन) मा प्रमाणपत्र र स्नातकका केहि बर्ष सँगै अध्ययन गर्यो । पढाई बाहेक केहि नजानेका मेरा प्रिय साथी कृष्ण तिम्रो सफल्ता र उपलब्धिमा म कत्ति रमाएकोछु । कत्ति गर्वानुभूती महसुस गर्दछु कि तिमीले यहि उमेरमै देशको लागि ठूलो मान्छे बनेकाछौं । म त इ...यसै प्रवास पसेको मान्छे । छातीमा देश बोकेर मात्रै के गर्नु ? यी गोडाले बस्तीको माटो नछोए पछि माटो र देशप्रेम भन्नु केवल आदर्श मात्रै बन्दछ । लौन सिडीयो साप ! नेहाको न्यायमा तपाई पनि निलगिरी भएर उभिँ दिनुहोस् । हुन्छ... ?
दोषी र अपराधीलाई यथासिघ्र पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा कारवाही होस् । नेहाको न्याय प्राप्तीमा कोटी–कोटी जनको कामना यहि हो । र मेरो देशमा यसरी अकालमा मृत्युवरण गर्ने अन्तिम चेली बनुन्–नेहा पुन ।
शनिवार, २०७२ माघ २३ गते १९:१२ / Saturday, Feb 06, 2016 7:12 pm